KUSALE kukhalwa emphakathini waseNtunjambili, eKranskop, kushona abantu abahlanu, kwalimala abangu-17 abebetapa inyama elolini ebigingqikile.
NONTUTHUKO NGUBANE | June 1, 2020
Abahlanu abashonile, amagama abo angakadalulwa kuze kwaziswe amalungu omndeni, bebetapa inyama ngoMgqibelo kwelinye iloli ebeligingikile.
Kuthe kusenjalo, kwaqhamuka elinye iloli ebelithwele impahla, laqonda ngqo kuleli obekutatshwa kulo inyama lashayisa abantu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Thembeka Mbele usiqinisekisile lesi sigameko wathi kuyaphenywa.
“Amaphoyisa aseKrankskop aphenya amacala okubulala ngokungenhloso abandakanya izimoto eziyisikhombisa. Kulezi zimoto ezibe sengozini kubalwa amaloli amabili, amaveni amane nemoto encane. Isigameko senzeke eSambaba. Ngokophenyo olusenziwe iloli yokuqala iphaphalazile yayoshayisa udonga oluseceleni komgwaqo. Iloli belithwele inyama yenkomo. Umphakathi unikezwa imvume yokuba uzithathele inyama, kungakafiki amaphoyisa endaweni yesigameko. Kuthe kusenjalo, kwaqhamuka enye iloli okuthiwa iphelelwe amabhuleki yayoshayisa iloli ebimile nezinye izimoto. Kushone abane abebehamba ngezinyawo, noyedwa otholwe ecindezeleke ngaphansi kweloli. Abangu-17 balimele. Abalimele bayiswe esibhedlela saseNtunjambili,” kusho uCol. Mbele.
Isolezwe lithole ngomthombo walo ongathandanga ukudalulwa ukuthi ngabo-10.30 ekuseni kwenzeka ingozi abantu bebejabule bezitapela inyama, emizuzwini embalwa kube sekukhalwa ubumayemaye abantu sebelimele.
“Abantu bebezitapela inyama benganake lutho ngesikhathi kuqhamuka iloli libashayisa. Abantu bebehlangene bethatha inyama benganakile nokwenze kwashayiseka abantu abaningi,” kusho umthombo osondelene nodaba.
Umgwaqo okwenzeke kuwo ingozi Isolezwe lithole ukuthi uyehlela futhi kujwayelekile ukuthi izimoto ziphaphalaze noma zishayise udonga oluseceleni komgwaqo.
Imizamo yokuthola imindeni yabashonile ayizange iphumelele izolo ngoba bekusalindwele ukuthi imindeni iyokhomba izidumbu ngokusemthethweni.
Abashonile kuvele ukuthi abangandawonye esigodini saseNtunjambili.